Nzuzo - Nwee obi ụtọ
Mbido » amụma nzuzo
Mmasị ewere ihe nzuzo gị. Iwu nzuzo a na-akọwa ihe ozi nkeonwe anyị na-anakọta na otu anyị si eji ya. Lee nke a iwu nzuzo nzuzo ịmatakwu banyere atumatu nzuzo na izugbe.
Nchịkọta Ozi gbasara nlekọta
Sava weebụ niile na-agbaso isi ihe ọmụma banyere ndị ọbịa ha. Ozi a na-agụnye, ma ọ bụghị naanị na, adreesị IP, ihe nchọgharị, timestamps na ịkọwa peeji. O nweghị ozi a nwere ike ịchọta ndị ọbịa ọ bụla na saịtị a. A na-enyocha ozi ahụ maka usoro nlekọta na mmezi oge.
N'ebe ọ dị mkpa, Amụma Mmasị na-eji kuki iji chekwaa ozi gbasara mmasị nke onye ọbịa na akụkọ ntolite iji mee ka onye nleta na / ma ọ bụ chee onye nleta na ọdịnaya nwere aha.
Ndị mmekọ mgbasa ozi yana ndị ọzọ nwere ike iji kuki, edemede na / ma ọ bụ mgbama weebụ iji soro ndị ọbịa gaa na saịtị anyị iji gosipụta mgbasa ozi na ozi ndị ọzọ bara uru. Ntuchi dị otú ahụ na-eme ozugbo site na ndị ọzọ site na sava ha ma na-edo onwe ha n'okpuru iwu nzuzo nke onwe ha.
Na-achịkwa Nzuzo gị
Rịba ama na ị nwere ike ịgbanwe mwube ihe nchọgharị gị iji kpochapụ kuki ma ọ bụrụ na ị nwere nchebara onwe gị. Ịkwụsị kuki maka saịtị niile anaghị akwado ya ka ọ nwere ike igbochi ojiji nke saịtị gị. Nhọrọ kachasị mma bụ iji gbanyụọ ma ọ bụ mee kuki na ntọala ọ bụla. Lelee ihe nchọgharị gị maka ntụziaka banyere otu esi egbochi kuki na usoro nlekota ndị ọzọ. Ndepụta nke a njikwa ihe nchọgharị weebụ njikọ nwere ike ịba uru.
Nkọwa Pụrụ Iche Maka Mgbasa Ozi Google
Mgbasa ozi ọ bụla Google, Inc., na ụlọ ọrụ nwere mmekọ nwere ike ijikwa na-eji kuki. Kuki ndị a na - enye Google ohere igosipụta mgbasa ozi dabere na nleta gị na saịtị a na saịtị ndị ọzọ na - eji ọrụ mgbasa ozi Google. Mụta otu esi pụọ na kuki nke Google. Dịka e kwuru n'elu, nyocha ọ bụla Google mere site na kuki na usoro ndị ọzọ bụ n'okpuru iwu nzuzo nzuzo nke Google.
Nchegbu ma ọ bụ ajụjụ banyere iwu nzuzo a nwere ike ịde mma na fitnessrebates@yahoo.com maka nkọwa ọzọ.
Ebe nrụọrụ weebụ a nwere ike ịnweta ụgwọ maka ịzụrụ ihe site na ịkọ njikọ. Onye nwe ebe nrụọrụ weebụ a, www.fitnessrebates.com, bụ onye so na Amazon Associates, Linkshare, na CJ.com Mgbakwunye Mmemme, nke a na-eme iji nweta ụzọ maka saịtị iji nweta ụgwọ mgbasa ozi site na ijikọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
Ikpughe njikọ Njikọ:
Ụfọdụ n'ime njikọ ndị anyị na-arụ bụ "njikọ njikọta." Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị pịa njikọ ma zụta ihe / ọrụ ahụ, ebe nrụọrụ weebụ a nwere ike ịnweta ọrụ nhazi. Njikọ ndị a nwere ike iji ngwanrọ nsuso ndị ọzọ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị pịa njikọ ma gaa na saịtị ahụ, a ga-edebe kuki na ihe nchọgharị weebụ gị nke ga-eme ka ebe nrụọrụ weebụ a nweta ọrụ "ọ bụrụ" ịzụta ngwaahịa na njedebe ọzọ.
Ka o sina dị, FitnessRebates.com na-atụ aro ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke anyị kwenyere ga-eme ka ndị na-agụ akwụkwọ anyị bawanye uru. Anyị na-ekpughe nke a dịka 16 CFR nke Federal Trade Commission, Nkebi nke 255: "Nduzi maka Iji Endorsements na Akaebe."
Amazon Mgbakwunye ngosi Rịba ama:
Mmasị na-arụ ọrụ bụ onye na-aga na Amazon Services LLC Associates Program, ihe mgbasa ozi mgbasa ozi iji nye ndị nwe ụlọ ọrụ ohere iji nweta ụgwọ mgbasa ozi site na mgbasa ozi ma na-ejikọta amazon.com na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla nwere ike ejikọta na Amazon Service LLC Associates Mmemme
CJ, ShareASale, Njikọ Mgbakwunye Kọntaktị nke Clickbank Ọhụụ:
Mgbatị ahụ ike na-esonye na mmemme mmekorita CJ (Commission Junction), ShareASale, na Clickbank, enwere ike ịkwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ịzụta ngwaahịa / ọrụ ma ọ bụ banye maka onyinye mgbe ịpịrị njikọ njikọta site na weebụsaịtị Fitness Rebates. Rịba ama: Mmemme njikọ nke Commission & ShareASale na-akwalite ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaahịa na ọrụ dị iche iche site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụlọ ọrụ dị iche iche.
DoubleClick DART Kuki:
Google, dị ka ndị na-ere ahịa nke atọ, na-eji kuki iji nye mgbasa ozi na www.fitnessrebates.com. Ojiji Google nke kuki DART na-enyere ya aka iji mgbasa ozi nye ndị ọrụ dabere na nleta ha na www.fitnessrebates.com na saịtị ndị ọzọ na Internetntanetị. Ndị ọrụ nwere ike ịpụ na ojiji nke kuki DART site na ịga na mgbasa ozi nzuzo nke mgbasa ozi Google na ọdịnaya ọdịnaya na URL na - esonụ - http://www.google.com/privacy_ads.html
Ọ bụrụ na ịhọrọ ịmekọrịta na anyị site na email, anyị nwere ike ijide ọdịnaya nke ozi email gi na
adreesị ozi-e na azịza anyị. Anyị na-enye otu nchedo maka nkwukọrịta kọmputa a nke anyị na-eji na-emezi ozi natara online, ozi na ekwentị. Nke a na-emetụtakwa mgbe ị debanyere aha anyị na ebe nrụọrụ weebụ anyị, debanye aha site n'ụdị nke ọ bụla site na iji adreesị ozi-e gị ma ọ bụ mee nzụta na saịtị a. Iji nwetakwuo ihe ọmụma hụ iwu email n'okpuru.
Kedu ka anyị si eji ozi ị nyere anyị?
N'ozuzu, anyị na-eji ozi onwe onye maka ebumnuche nke ịhazi ọrụ azụmahịa anyị, inye anyị
ọrụ ahịa ma na-eme ihe ndị ọzọ na ọrụ ndị ọzọ na ndị ahịa anyị.
Anyị agaghị enweta ozi gbasara onwe gị mgbe ị gara na anyị
saịtị, ma ọ bụrụ na ị họrọ ịnye anyị ozi dị otú a, a gaghị erekwa ozi dị otú ahụ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ
zigara na ndị ọzọ na-enweghị ike na-enweghị nkwado nke onye ọrụ n'oge nnakọta.
Anyị nwere ike igosipụta ozi mgbe iwu kwadoro ime ya, na okwu ndị ọzọ, mgbe anyị, n'ezi okwukwe, kwenyere na iwu chọrọ ya ma ọ bụ maka nchedo ikike iwu anyị.
Anyị na-agba mbọ idobe adreesị ozi-e gị. Anyị anaghị ere, ịgbazinye ego, ma ọ bụ wezuga akwụkwọ ndenye aha anyị
nye ndị ọzọ, anyị agaghị enye ozi gbasara gị na onye ọ bụla ọzọ, gọọmentị
ụlọ ọrụ, maọbụ ụlọ ọrụ n'oge ọ bụla ọ gwụla ma ọ bụrụ na iwu ejiri iwu mee ya.
Anyị ga-eji adreesị ozi-e gị naanị nye ozi gbasara oge a na ngwaahịa / ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịmasị gị.
Anyị ga-edebe ozi ị zitere site na e-mail dịka iwu iwu gọọmentị dị.
N'akwado iwu CAN-SPAM, ozi e-mail niile sitere na nzukọ anyị ga-akọwa nke ọma onye onye e-mail ahụ si
ma nye nkọwa doro anya banyere otu esi akpọtụrụ onye na-eziga. Na mgbakwunye, ozi ozi e-mail ga-agụnye
ozi nkenke banyere otu esi wepu onwe gị na listi nzipu ozi anyị ka ị ghara inweta ozi-e ọzọ
nkwurịta okwu si n'aka anyị.
Nhọrọ / Ọpụpụ
Ebe nrụọrụ anyị na-enye ndị ọrụ ohere iji pụọ na ịnweta nkwukọrịta site n'aka anyị na ndị mmekọ anyị site n'ịgụ
ntuziaka ahụ wepu aha na ala nke ozi ọ bụla ha na-enweta n'aka anyị mgbe ọ bụla.
Ndị ọrụ nke na-achọkwaghị inweta akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ nkwado anyị nwere ike ịpụ na ịnweta ndị a
nkwukọrịta site na ịpị njikọ njikọ wepu aha na e-mail.
June 10, 2013 Akwụsị Enweghị asịsa